राजाकै सिस्टम ठिक भनेपछि करिष्माको आलोचना – Mero Film
अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले प्रखरवक्तामा रुपमा परिचित छिन् । मनमा लागेका कुरा रोक्नै सक्दिनन्। एनले व्यक्त गरिहाल्छिन्। उनले पछिल्ला समयका राजनितिक गतिविधिलाई नियालिरहेकी करिष्माले मनमा लागका केहि कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि आलोचित बनेकी छन्।
उनले राजनितिक क्षेत्रबाट ग्रसित बनेको एक स्टाटस सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पोष्ट गरिन्। उनले समाचारमा आएका कमेन्ट हेर्दा आफुले राजनितिक मन पराउने कमै पाए त्यसैले यो पाटीको सिस्टम काम छैन भन्ने मनका भाव पोखिन्। उनले दुइ विचार ठिक छ ,राजा राख्ने र अर्को दुइ विचारले नेपाल चलाउने शब्द लेखेकी थिइन्।
उनले लेखेका शब्दले उनलाई पोलेको छ। उनलाई गणतन्त्र विरोधी भन्दै आलोचना गर्नेको बाडी नै लागेको छ। राजतन्त्रमा के थियो र भन्ने खाल्का गालि गलोजले अभिनेत्री करिष्मालाई तनाव दिएको छ। करिष्माले आफुलाई लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि उनको खोइरो खन्ने र समर्थन गर्नेको ओइरो लागेको छ।
करिष्माले आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने हो र भन्या ? उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्,‘ धेरै कमेन्ट हेरे ! यो कामै छैन ! पार्टी सिस्ट्म काम छैन । दुई विचार काम छ । राजा राख्ने । दुई विचार ले नेपाल् चलाउने।’
२०७७ माघ ८ गते ९:०७ मा प्रकाशित